CIN Khabar छाउपडीविरुद्ध सरकार कठोर कदम चाल्दै
छाउपडीविरुद्ध सरकार कठोर कदम चाल्दै छाउ बस्न बाध्य पार्ने जो पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन्, अब जाहेरी पर्खेर कुनै पनि प्रहरी बस्दैनः महान्यायाधीवक्ता खरेल
सीआईएन शुक्रबार, माघ १०, २०७६, ११:४२:००
सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा अझैँ पनि प्रचलनमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण बितेको १२ वर्षमा २३ जनाभन्दा धेरै महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कानुनले छाउपडी मान्ने र राख्नेलाई कारबाही गर्नु भने पनि कानुन नै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । छाउपडीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारका योजना र रणनीतिका बारेमा साथी गीता चिमोरियाले महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
छाउपडीविरुद्धमा लाग्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बोलाएर नै निर्देशन दिनुभयो ? ठीक समयमा यी सबै काम गरेँ भन्ने लाग्छ कि ढिलो भयो जस्तो लाग्छ ?
रजश्वला भएको समयमा महिलाहरू घरमा बस्न नपाउने, समाजमा कतिपय महिलाहरूको मृत्यु पनि भैसके पछाडि मैले व्यक्तिगत रूपमा होइन, कानुनले नै यो विषयमा सोचेको छ । विगत वर्षमा जतिवेला फौजदारी संहिताको मस्यौदामाथि छलफल चल्दै थियो ।
त्यतिखेर संसद्ले गम्भीर बनाएर यो विषयमा छलफल गरेको मलाई थाहा छ । कुनै बेला म कानुनमन्त्रीको भूमिकामा थिएँ । कुनै बेला म संसद्को सदस्य भएँ । कुनै बेला म प्रमुख सचेतकको भूमिकामा थिएँ । जहाँ भए पनि गलत परम्पराका विरुद्धमा कुनै न कुनै योगदान गरेको छु भन्ने लाग्छ ।
कानुन बनेको पनि छ । गत भदौमा लागु भएको कानुनले छाउपडिलाई अपराध मानेको छ । त्यसपछि पनि किशोरी र महिलाको मृत्यु भइरहेको छ । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था किन बन्यो ?
पछिल्लो चरणमा कानुन बनिसकेपछि पनि छाउपडीमा जाने काम भइरहेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै पनि हामीले रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर त्यो भएन । त्यो कमजोरी मेरो विचारमा रह्यो । तर जब अछाममा छाउगोठमा नै किशोरीको मृत्युभयो ।
त्यसलाई सीआईएन लगायतका मिडियाले सार्वजनिक गरे । त्यसको लागि म सबै मिडियाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । त्यसपछाडि हामीले यसलाई सोधीखोजीको विषय बनायौँ ।
म आफैँले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई, प्रहरीलाई, प्रहरी महानिरीक्षकलाई एक्टिभेट गर्ने काम गरेँ र मैले सोधेँ । त्यसमा जाहेरी दर्खास्तमा पर्खनुपर्दैन, प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा यो केश अगाडि जानुपर्छ भन्ने म नै हुँ ।
प्रहरी, उजुरी कुरेर बस्ने, गाउँका मान्छेहरू त्यहीँ नै घटनालाई लुकाउनुपर्छ भनेर बसिरहेको अवस्थामा कानुन बनेको छ भन्ने कुराले के अर्थ राख्छ ?
हिजो अर्थ राखेको छैन भने अब अर्थ राख्छ । अर्थ राख्नेगरी, सुनेनीगरी, बुझिनेगरी, देखिनेगरी कानुनको दायरामा मान्छेहरूलाई ल्याइन्छ । यदि कुरा बुझ्छन् भने बुझ्छन् । होइन भने कानुनको दायरामा ल्याउर दण्डित गर्ने गरी अब अभियान अगाडि चलाईन्छ ।
केही समय अगाडि हामीले केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बस्यौँ । बैठक बस्दाखेरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गर्ने गरी समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामीले समन्वय र पत्राचार गरेका छौँ ।
कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलको दवाव वा भूमिका अलि बढी देखिको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । मैँले यो विरुद्धको काम गरेँ भने भोलि मलाई भोट नआउला कि भन्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरूमा डर पनि देखिन्छ । अब के उनीहरूलाई पनि कारबाही होला ?
छाउमा पठाउने र छाउमा बस्ने मान्छे कानुनको दायरामा आउँछ । त्यसभित्र उनीहरू पनि पर्छन् र उनीहरु पनि कानुनको दायरामा आउँछन् ।
सुदूरपश्चिमका महिला र किशोरीले महान्यायधिवक्ताले गर्नुभएको पछिल्लो छलफल र देखाएको सक्रियताबाट आफ्नो जीवनमा परिवर्तन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के के छन् ?
पहिलो कुरा महिला दिदीबहिनीले, महिलाहरूले आफू छाउमा जान रोकिनु पर्यो । दोस्रो कुरो घरपरिवारका सदस्यले कुनै सदस्यले पठाउँछ भने म जान्न, म गएँ भने म पनि फौजदारी कानुनको दायराभित्र पर्छु र मलाई पुलिसले पक्राउ गर्छ र थुन्छ भन्न सक्नुपर्यो ।
अनि अर्को कुरा यो अन्धविश्वासबाट बाहिर निस्कनु पर्यो । जहाँ बढी प्रभावित ठाउँहरू छ, त्यहाँका प्रहरी र सरकारी वकिलहरूलाई म आफैले बोलाएर, गृहसचिव ,म, प्रहरी प्रधान कार्यालयको अफिसरहरूसँग बसेर उहाँहरूको समस्या के हो ? भनेर हामीले छलफल चलायौँ । त्यसभन्दा पछाडि अब कसरी जाने भन्ने कुराको उहाँहरूलाई निर्देशन दिईएको छ । अब जाहेरी पर्खेर कुनै पनि प्रहरी बस्दैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १०, २०७६, ११:४२:००